Horukon uye boka configuration
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Horukon uye boka configuration
In Horukon kubatwa, zvinonzi akati dzatoparadzira ari jackpot kuburikidza muzvikwata zvisina tsarukano iri nepachinko muchina iri transformer. Saka, zvinonzi vanobudirira Horukon kubatwa, ndinoda kuona wakadii zvinhu ukama pakati Horukon uye mapoka. Nepachinko muchina kwave zvakabatana achishandisa transformer kuti vawane simba zvitengeswa.
ari nhamba zvine chokuita ne transformer, anotaurwa so kuparadzaniswa mapoka mana navashanu. Kana rava boka pakupera nhamba, kana rava boka iri divi-ne-divi iri Serial nhamba, zvinoita sokuti chokwadi kuti zvose ndakazvipiwa vakagamuchirwa.
Chokutanga, kana yava nguva muchida kuti ariswededze guru raparadza, maererano mumwe mutemo, Horukon ndiko, ndinoda kuita jackpot mutongo. Anouya kutsunga jackpot panowanikwa nguva, Horukon ari boka hwaro, kuti vaswedere boka kuti vaunze makuru corners.
In boka kuti akunda, jackpot anotanga kuitika, mukati boka iro jackpot akapiwa, ndiko kuti vamwe nguva jackpot anobuda. Mukuwedzera, muna Horukon, kuitira kuti bhora kubva yose nepachinko yokumusoro shure paavhareji, ukuru panowanikwa imwe nguva uye nokurova guru kuti vaunze makuru raparadza, rave akati kudzora.
kuti, kana kubuda ari kutsvetera muboka kuti jackpot chinowanzoitika kuitika, kufanotaura boka kuti rinotevera guru raparadza chichaitika, nokuti Neraiuchi ndiye Horukon kubatwa.
kushandisa hurongwa chiso authentication, apo kusarudza munhu achivaratidza kuti jackpot, uyewo inonyadzisa yokufungidzira kuti kuita boka rotari.